China Capsule Bottle PET Nhema fekitari uye vagadziri | Qianduo kavha
Chitarisiko mhando yezvokurapa bhodhoro repurasitiki: yemuromo yakasimba yekurapa bhodhoro inowanzo chena. Iyo yemumuromo yemvura mushonga bhodhoro inowanzo kuve brown kana yakajeka, uye zvimwe zvigadzirwa zvemavara zvinogona kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi. Ruvara runofanira kuva yunifomu, isina pachena musiyano weruvara. Icho chepamusoro chinofanira kuve chakatsetseka uye chakatsetseka, pasina kujeka deformation uye kukwenya, maburi ejecha, oiri mavara uye matema. Muromo webhodhoro unofanirwa kuve wakatsetseka uye wakatsetseka.
epurasitiki denderedzwa piritsi PET bhodhoro dhizaini ruzivo: Iko kuomarara, kuomarara uye kukotama kupokana kwePET mabhodhoro epurasitiki kunogona kuvandudzwa nekushandura chimiro chepamusoro chePET mabhodhoro epurasitiki, senge muviri webhodhoro iri mutete uye uchiwedzera iwo akakomberedza maburi kana mbabvu pamusoro pebhodhoro. Longitudinal grooves kana stiffeners anokwanisa kubvisa kukanganisa, kudzikira kana kushanduka kwemabhodhoro ePET pasi pemutoro wenguva refu.
Yakadzama kuongororwa kwePET bhodhoro dhizaini: Dhizaini yemupurasitiki bhodhoro muromo inofanirwa kutarisa maitiro ekuita epurasitiki bhodhoro muromo unyore kutarisana nekepisi uye chisimbiso. Pasi pebhodhoro repurasitiki ndicho chikamu chisina kusimba chemakanika mashandiro ePET epurasitiki bhodhoro. Naizvozvo, pasi pebhodhoro repurasitiki kazhinji rakagadzirirwa kuve concave; kona yebhodhoro repurasitiki uye chikamu che concave chinoitwa neakakura arc. Nekuda kwekurongedzera kuunganidzwa kwemabhodhoro epurasitiki uye nekuwedzera kuisirwa kwemabhodhoro epurasitiki, maburi emukati anofanirwa kugadzirwa pazasi pemabhodhoro epurasitiki. Kune kona yebhokisi repurasitiki rekona, inoda kutsigira mizhinji yemutoro webhodhoro repurasitiki. Naizvozvo, kuwedzera ukobvu hwemadziro echikamu ichi kunobatsira kuenderera mberi nekusimbisa kuomarara uye kuramba kurwisa kwebhodhoro repurasitiki. Naizvozvo, kuitira kuverengera kuomarara uye kuomarara kwePET plastiki bhodhoro, mukuwedzera pakusarudza zvinhu zvine hurefu hwakaomarara uye kuomarara, chimiro chePET bhodhoro repurasitiki chinofanira kugadzirwa, kuitira kusimudzira kuomarara, kuomarara uye simba rinotakura mutoro bhodhoro repurasitiki.
Pashure: Acrylic zvizoro bhodhoro; Cream bhodhoro
Zvadaro: Capsule PET Bhuruu
Capsule PET Bhuruu